Warshad Khatimidii Saxiixa Madax - Soosaarayaasha Khatarta Maskaxda ee Shiinaha, Alaab-qeybiyeyaal
Toyota Gawaarida Gawaarida Gawaarida Shiinaha Saaraha
Xirmooyinka Gawaarida Gawaarida Gawaarida 90913-02060
Waxyaabaha: VITON, FKM
Xirxirida: 8 kumbuyuutar bac kasta
Nissan Viton Gawaarida Gawaarida Gawaarida Shiinaha Khatimidii Shiinaha Soo saare
Nissan Viton Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida
Kia Pride Valve Stem wuxuu xiraa Shiinaha Soo saaraha
Khatimidii Kia Pride Valve Stem
Waxyaabaha: VITON iyo NBR
Codsiga: Ka dib suuqa iyo OEM
Xirmooyinka waalka waalka waa aalado bixiya qiyaasta qiyaasta saliida ee qeexida iskudhafka wiishka ee matoorrada gubida gudaha si loo saliido hagaha waalka loona yareeyo howlaha mishiinka. shaabadaha waalka ayaa loo heli karaa matoorada naaftada iyo kuwa shidaalka leh iyada oo aan kor loo qaadin.
GOS waxay u soo bandhigtaa naqshadaha caadiga ah ee "heer sare-ee-farshaxanka" shaabadda waalka:
Peugeot Valve Valve Stem Seals Khatimidii Shiinaha
PEUGEOT 405 206 VALVE SEALare aaladaha bixiya qiyaasta qiyaasta saliida ee qeexida iskudhafka wiishka ee matoorrada gubida gudaha si loo saliido hagaha waalka loona yareeyo howlaha mishiinka. shaabadaha waalka ayaa loo heli karaa matoorada naaftada iyo kuwa shidaalka leh iyada oo aan kor loo qaadin.
Shaabad aan isku dhafaneyn: waxay buuxisaa shaqada qiyaasta saliidda
Gawaarida Gawaarida Isuzu Valve Stem wuxuu xiraa Shirkadda Shiinaha
Xirmooyinka waalka waalka waa aalado bixiya qiyaasta qiyaasta saliida ee qeexida iskudhafka wiishka ee matoorrada gubida gudaha si loo saliido hagaha waalka loona yareeyo howlaha mishiinka. Xirmooyinka GOS waalka ayaa loo heli karaa matoorada naaftada iyo kuwa shidaalka leh iyada oo aan la kordhin.
Baabuurka iyo mootada shaabadda weyne
Materail: FKM / VITON Heerkulka: -40 ～ + 250 ℃ Cadaadis: ka hooseeya 0.02MPA Xawaaraha Wareegga: ka hooseeya 10000rpm Valve stem seal waa nooc ka mid ah shaabadda saliidda, taas oo guud ahaan ay sameysmaan iskutallaabidda jir dibadda iyo fluororubber wada. Guga is-adkeeya ama silig bir ah ayaa lagu rakibay furitaanka radial ee shaabadda saliidda ee lagu xiro usha hagaha mashiinka mashiinka. Khatarta saliidda waalka ayaa ka horjoogsan karta saliidda soo galitaanka iyo tubooyinka qiiqa, taasoo keeneysa saliid lumis, ka hortagga isku darka gaaska ee baatroolka ...